Uluhlu 4.. Funda iTheyibhile yokuPhindaphinda kuka-4
Amaxesha ama-4 etafile
Itheyibhile ye-4 ibonakala ngokusixelela isiphumo samaxesha ama-4 nabuphi na ubungakanani. Le theyibhile ichaza ukuba naliphi na inani eliphindaphindwe ngo-4 liyakuphindeka kane elo nani, ngendlela yokuba 4 × 4 = 4 okanye yintoni 16 4 + 4 + 4 = 4.
Masibone umzekelo: ukuba sineengxowa ezi-4 kwaye nganye kuzo sineebhola ezi-5, siyakuba ne-4 × 5 = iibhola ezingama-20. Kulo mzekelo siye sakwazi ukuqaphela ukuba kukho iibhola ezingama-20 xa zizonke.
Le tafile iya kusetyenziswa kubomi bakho bonke nge Ezo zinto ufuna ukuzazi zidibanisa ukuya kumaxesha ama-4 kwisixa. Nanini na xa sithandabuza malunga nesixa samaxesha ama-4 ngesixa, kufuneka sikwile tafile.
Iimpawu zetheyibhile e-4 :
• Yenye yeetafile esixelela ukuba siphinda-phinde kangaphi kwinani.
• Naliphi na inani eliphindaphindwe ngo-4 liyakuhlala liphindaphindwe kane elo nani, kangangokuba u-4 × 3 = 4, ofanayo no-12 + 4 + 4 = 4.
• Itafile ka-4 izakusinceda, phakathi kwezinye izinto, ukwazi isisombululo sokuthandabuza esinako malunga nexabiso leemveliso ezahlukeneyo xa kukho amaxesha ama-4 loo mveliso.
• Ukuba sineebhasikithi ezi-4 ezinee-apile ezi-2 nganye, sine-4 × 2 = ii-apile ezi-8 zizonke.
• Ukuba sineebhegi ezi-4 kwaye kuzo nganye kukho iilekese ezi-5, siyakuba no-5 × 4 = 20
• Ukuba sineebhasikithi ezi-4 kwaye ibhaskithi nganye ineebhanana ezi-3, siyakuba ne-4 × 3 = iibanana ezili-12.